Xildhibaanad Muna Kay oo shaacisay inay ka bad-baaday isku day dil lagu qaarijin lahaa (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanad Muna Kay oo shaacisay inay ka bad-baaday isku day dil lagu qaarijin lahaa (SAWIRO)
Mid ka mid ah xildhibaanada Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Muna Sheekh Khaliif Abuu (Muna Kay) ayaa si dirqi ah uga bad-baaday isku day dil lagu qaarijin lahaa, kadib markii rasaas lagu furay gaari ay la socotay.
Rasaastaasi ayaa la sheegayaa inuu dhaawac culus kasoo gaaray mid ka mid ah illaalada xildhibaanada oo xilligaasi gaariga la saarnaa.
Sawiro iyo qoraal ay xildhibaanada soo dhigtay barta Snap-Chat-ka ayaa waxay ku sheegtay in gaariga ay la socotay la weeraray islamarkaana uu dhaawac soo gaaray mid ka mid ah illaaladeed balse haatan lagu daaweynayo xarumaha caafimaad ee magaalada Muqdisho.
Gaariga xildhibaanada ayaa ka muuqday rasaas lagu asqeeyay muraayadaha iyo dhiig daadsan albaabka gaariga.
Illaa iyo haatan lama oga qaabka iyo meesha uu ka dhacay weerarkaan, waxayna xildhibaanada sheegtay oo kaliya in la weeraray gaarigeeda, mid ka mid ah illaaladeedane uu isbitaal ku jiro.
Waa weerarkii ugu horeeyay ee lagu qaado xildhibaan ka tirsan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, waxayna xildhibaanadaan la weeraray ka mid ahayd xildhibaanadii dhawaan codadkooda siiyay madaxweynaha doorashada ku guuleystay ee Maxamed C/laahi Farmaajo.
Muna Kay ayaa sidoo kale ah haweeney caan ku ah naqshadeynta dharka fashion-ka ah iyo is qurxinta dumarka, waxayna dhawaan kusoo biirtay xildhibaanada Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.